पहाडी जिल्लाका महिलाहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै सुजङ अस्पतालमा गाइनो सेवा शुरु
अस्पतालले सेवा सुरु गरेको पहिलो दिनमै ८५ जना महिला विरामीले सेवा लिए
सोमवार, माघ २७, २०७६ NB Media Network
डोटी । सुजङ्ग अस्पतालले नयाँ व्यवस्थापनका साथ थप स्वास्थ्य सेवा सुरु गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुकै उतकृष्ट भौतिक पुर्वाधार भएको सो अस्पतालले सोमबारबाट गाइनो सेवा (महिला विशेषज्ञ सेवा) सुरु गरेको हो । पहाडी जिल्लाका महिलाहरुमा पाठेघर र स्तन सम्बन्धि बढी सम्स्या देखिने भएकाले अस्पतालले गाइनो सेवा सुरु गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष सुरेश जोशीले बताए । उनले व्यवसायीक लाभभन्दा सेवाभावलाई मध्यनजर गरी अस्पतालमा थप सेवा सुचारु गरेको बताए ।
अस्पतालले सेवा सुरु गरेको पहिलो दिनमै ८५ जना महिला विरामीले सेवा लिएका छन् । जसमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका १० जना विरामीको निशुल्क उपचार गरिएको छ । अन्य सबै विरामीहरुलाई सेवा सुरु गरिएको अवसरमा २० प्रतिशत प्रयोगशाला र १० प्रतिशत औषधिमा छुट गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । सेवा लिन आएका विरामीहरु मध्य ९ जनालाई शल्यक्रियाका लागि १५ दिन पछि आउँन भनिएको छ ।
महिला विशेषज्ञ सेवा सुरु गरे संगै सुजङ्ग अस्पताल पहाडी जिल्लामा गाइनो सेवा प्रदान गर्ने एक मात्र अस्पताल बनेको छ । यस अघि शिविरको भरमा औषधि उपचार गर्ने यहाँका महिला विरामिहरुले तराइ तथा भारतका अस्पतालहरुमा गएर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । अबका दिनहरुमा विरामिको औषधि उपचार, परामर्श संगै शल्यक्रिया समेत सुजङ्ग अस्पतालमै गर्ने व्यवस्था मिलाइने अस्पतालका प्रशासकिय प्रमुख अर्जुन बलायरले बताए ।
यस भन्दा पहिला प्रशुति गृह काठमाडौंमा कार्यरत महिला रोग विशेषज्ञ डाक्टर निता यादव सुजङ्ग अस्पतालमा नियमित रहनेछिन् । उनले महिलाको बाँझोपन पाठेघर खसेको वा खसे जस्तो हुने, तल्लो पेट दुख्ने, ढाड दुख्ने, यौनी मार्ग दुख्ने, चिलाउने, सुख्खा हुने, पोल्ने सेतो पानी बग्ने, गन्ध आउने, विविरा आउने, स्तन दुख्ने, स्तनमा गाँठागुँठी भएको मासु पलाएको जस्ता समस्याको उपचार गर्नेछिन् । डाक्टर यादवलाई अस्पताल प्रशासनले सोमबार नै एक कार्यक्रमका विच स्वागत गरेको थियो ।
स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै डा. यादवले ग्रामिण महिलाको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै शुद्ध सेवाभाव बोकेर डोटी आएको बताइन् । डा. यादव संगै सुजंङ्ग स्पतालमा एम्बिबिएस् डाक्टर मोहन पुजारी समेत कार्यरत छन् । अस्पतालमा अहिले ओपिडी सेवा, गाइनो सेवा, चौबिसै घण्डा इमरजेन्सि सेवा, प्रशुती सेवा, सल्यक्रिया द्धारा प्रशुती सेवा, पाठेघरको शल्यक्रिया, डिजिटल भिडियो एक्सरे सेवा, ल्याव सेवा, महिला बिशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
यस क्षत्रमा महिलाहरुमा बढी स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेकाले महिला बिशेषज्ञ सेवा प्रभावकारी र लाभदायक हुने स्थानिय शंकर कठायतले बताए । उनले भने,‘महिला विरामीहरु पुरुष डाक्टर संग आफ्नो स्वास्थ्य समस्याका बारेमा खुलेर परामर्श लिन नसक्दा रोग लुकाउँने गरेकाछन् । उपचारका लागि बाहिर जाँदा धेरै खर्च हुने डरले पनि रोग लुकाउँने गर्छन् । अब त्यो समस्या समाधान भएको छ । अस्पतालले जनस्वास्थ्यलाई मध्यजनर गरेर थपेको सेवा प्रती खुसी छौं ।’
प्रकाशित मिति: सोमवार, माघ २७, २०७६, ११:०२:००
नेकपाका कार्यकर्ता कोरोना विरुद्ध सचेतना छर्दै
एक जना नेपालीमा भेट्टियाे काेराेना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दियो जानकारी
सोमवार, चैत्र १०, २०७६ NB Media Network